နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၃ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၇)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နော်ဝေနိုင်ငံ Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) Program Phase II အရ (၂၀၁၉-၂၀၂၃) အတွင်း ရေအားလျှပ်စစ်နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ရေးဆိုင်ရာ Grid Code များရေးဆွဲခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲရေး၊ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း စသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် အကူအညီပေးခြင်း၊ Oil for Development (OFD) Program အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် နော်ဝေနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာသင်များစေလွှတ်ရေး အစီအစဉ်များ၊ သယံဇာတအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ မျှဝေခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများ မျှဝေခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ဆဲ/ဆောင်ရွက်မည့် ရေတို၊ ရေရှည် အစီအမံများ၊ နော်ဝေနိုင်ငံကုမ္ပဏီများမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် ရေအားစီမံကိန်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍတို့၏ လက်ရှိ အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင်နှင့် ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။